यसलाई बिर्सिदिनुहोस् : नेपालचर्च डट कम NepalChurch.com
[0] October 26, 2016	| Sarju Rijal
बुधवार, अक्टोबर २६, कार्तिक १०
‘आफ्नो हृदय परमेश्वरमा लगाउनुहोस् र आफ्ना हात उहाँतिर पसार्नुहोस्।’ —अय्यूब ११:१३
‘महान् वैद्य’ येशूले कुनै संक्रमित घाउलाई कहिल्यै पनि ढाकछोप गर्नुहुन्न। उहाँले यसलाई चिरफार गर्न, बग्न दिन, सफा गर्न, र निको हुन समय दिन चाहनुहुन्छ। सायद तपाईंले वैवाहिक सम्बन्धभन्दा बाहिर सन्तान जन्माउनुभएको छ, वा गर्भपतन गराउनुभएको छ, वा झ्यालखानमा पर्नुभएको छ, वा तीतो सम्बन्ध विच्छेदको अनुभव गर्नुभएको छ।
निराश नहुनुहोस्। येशू तपाईंका सदगुणहरूद्वारा प्रभावित हुनुहुन्न; उहाँले ‘हाम्रो दुर्बलातामा’ (हिब्रू ४:१५) सहानुभूति देखाउनुहुन्छ। उहाँले तपाईंको संघर्ष बुझ्नुहुन्छ। ‘उहाँ आफैँले कष्ट भोग्नुभयो र परीक्षित हुनुभयो, यसैले परीक्षामा पर्नेहरूलाई उहाँले सहायता गर्न सक्नुहुन्छ’(हिब्रू २:१८)। विगतमा तपाईंको जस्तो समस्या भएको कसैलाई परमेश्वरले आशिष दिन र प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छहोला र भनी सायद तपाईं सोच्दैहुनुहुन्छ।
हो, सक्नुहुन्छ ! अंग्रेज कवि विलियम कुपरको भजनले यसलाई यसरी व्यक्त गर्छः ‘इम्मानुएलको नसाबाट निकालिएको रगतले भरिएको तलाउ छ, त्यसमा डुबुल्की मार्ने पापीहरूका सबै दाग मेटिन्छ।’ पश्चात्तापका इनामहरू उदेकका छन् !
सोपरले अय्यूबलाई यस्तो जवाफ दिन्छन्ः ‘आफ्नो हृदय परमेश्वरमा लगाउनुहोस् र आफ्ना हात उहाँतिर पसार्नुहोस्। तपाईंको हातमा भएको पाप दूर गर्नुभयो भने, र कुनै अधर्मलाई तपाईंको घरमा बस्न दिनुभएन भने, तब कुनै शर्मविना तपाईंले आफ्नो शिर खड़ा गर्नुहुनेछ, तपाईं डरविना स्थिर मानिस हुनुहुनेछ। तब तपाईंले आफ्नो दुःख बिर्सनुहुनेछ। बगेर गएको पानीझैँ त्यो तपाईंले सम्झनुहुनेछ … आशा भएको हुनाले तपाईं सुरक्षित हुनुहुनेछ। तपाईंले चारैतिर हेर्नुहुनेछ, र निर्धक्क सुत्नुहुनेछ। तपाईं कसैको डर नमानी पल्टनुहुनेछ, र धेरै मानिसहरूले तपाईंको निगाह प्राप्त गर्न खोज्नेछन्’ (अय्यूब ११:१३–१५)।
चाहे यो तपाईंले गर्नुभएको कुनै कुराको बारेमा दोषको भावना होस्, वा तपाईंलाई लगाइएको कुनै चोटको पीडा होस्— यसलाई जान दिनुहोस् ! आज, परमेश्वरको अनुग्रहको नदीमा प्रवेश गर्नुहोस् र तपाईंलाई स्वतन्त्र गर्दै बहन यसलाई अनुमति दिनुहोस्।
आत्मिक भोजनः यशैया २२–२५, यूहन्ना ६:६०–७१, भजन ११४, हितोपदेश २८:१–४
« जोखिम उठाउनुहोस् !
मृत्यु के हो? »